यस्ता हुन्छन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, यी हुन् बचाउने आठ उपाय ! सबैले जानीराखौं – Annapurna Daily
यस्ता हुन्छन् मृगौला फेल हुन लागेको प्रारम्भिक संकेत, यी हुन् बचाउने आठ उपाय ! सबैले जानीराखौं
On Aug 27, 2021 10,105
काठमाडौँ । हाम्रो शरीरमा किड्नी अर्थात मृगौलाले रगत सफा गर्ने काम मात्र गर्दैन, पानीको सहीस्तर कायम राख्ने र हर्मोन स्रावित गर्ने काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले मानव शरीरका लागि किड्नीको महत्वपूर्ण स्थान छ । त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ । त्यसका लागि यो आठ कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ:
मधुमेहको स्तर: रगतमा ग्लुकोजको स्तर बढ्नुले मधेमेह जस्ता रोगको खतरा त बढ्छ नै, यसबाट किड्नीका आन्तरिक नलिकाहरु पनि नष्ट हुन सक्दछ। यी नलिकाहरुमा हानी पुग्दा त्यसले रक्तप्रवाहलाई राम्रोसँग फिल्टर गर्न सक्दैन ।
ब्लड प्रेसर बढ्न नदिनुस्: उच्च रक्तचाप किड्नी फेल हुनुको अर्को मुख्य आम कारण हो । उच्च रक्तचापबाट पनि रक्त नलिकाहरुको भित्तामा हानी पुग्दछ । स्वस्थ मृगौलाका लागि रक्तचाप पनि १४०÷९० एमएमएचजीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
स्वस्थ आहार: खानपानको महत्वलाई कसरी पो नजरअन्दाज गर्न सकिन्छ । फलफूल, सागपात र फाइबरयुक्त खानेकुराबाट तौलका साथसाथै किड्नीको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ । खानामा नुनको मात्रालाई पनि कमभन्दा कम गर्ने कोशिस गर्नु जरुरी छ।
चुरोट बन्द: रक्त प्रवाहहरुलाई नष्ट गर्नमा धुम्रपानको ठुलो हात हुन्छ । यसका कारण रगत राम्रंोसँग फिल्टर हुन सक्दैन । चुरोट छोड्दा अरु पनि कयौ प्रकारका फाइदा हुन्छन्,जसका बारेमा हामी अक्सर कुरा गर्ने गर्दछौ ।
पेनमिलर औषधि सेवनमा रोक: यदि लामो समयसम्म पीडानिरोधक औषधि सेवन गर्ने हो भने पनि यसबाट किड्नीमा नराम्रो असर पर्दछ । यदि कसैको मृगौला पहिलाबाटै केही कमजोर छ भने उनीहरुले पेनकिलर औषधिबाट निकै खतरा हुन सक्दछ । यस्ता औषधिहरु चिकित्सकको सल्लाहपछि मात्रै लामो समय सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।